မြစ်ရေစည်းချက် . . . ဧရာဝတီ - (၇) | Mizzima Myanmar News and Insight
မြစ်ရေစည်းချက် . . . ဧရာဝတီ - (၇)
မြစ်ရေစည်းချက် . . . ဧရာဝတီ (၆)
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖက် လူအသွားအလာများတဲ့ တရုတ်ပြည်နယ်စပ် ပန်ဝါမြို့နဲ့ ချီဖွေမြို့အထိ ချီဖွေချောင်းရဲ့ အခြေအနေကတော့ မြေရှားသတ္ထုတွေကို အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်နေကြလို့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ ချောင်းရေဟာ ညစ်နွမ်းပျက်စီးနေပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ညစ်နွမ်းနေတဲ့ရေတွေဟာ သတ္ထုတူးဖော်နေတဲ့နေရာတွေကနေ ချီဖွေငယ်ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ တမံတုတ်ထားတဲ့ နေရာထိကို စီးဆင်းလာကြပါတယ်။
မြစ်ရေစည်းချက် . . ဧရာဝတီ (၅)
မြစ်ရေစည်းချက် . . ဧရာဝတီ (၄)
လျှပ်စစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ အဲဒီချောင်းရေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့်ထိ အထူးသဖြင့် အမှိုက်များနှင့် အနယ်အဖတ်များ လုံးဝမပါအောင် ရေကို ပြန်သန့်စင်ရပါတယ်။ အဲဒီရေတွေဟာ ပိုက်လုံးကြီးတွေထဲကတစ်ဆင့် ဒလက်ကြီးတွေဆီသွားပြီး အဲဒီဒလက်ကြီးတွေကို လည်ပတ်စေကာ ဒိုင်နမိုကနေ လျှပ်စစ်မီးထုတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ‌ရေတွေကိုသဘာဝအတိုင်း ပြန်သန့်စင်တော့ ကုန်ကျစရိတ်က ပိုများလာပြီး၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အမြတ်နည်းသွားတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပြီးတဲ့နောက် အဲဒီရေတွေဟာ အန်မိုင်ခမြစ်ထဲကို တဖန်ပြန်စီးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ရေစည်းချက် . . . ဧရာဝတီ (၃)
ချီဖွေချောင်းဝကနေ အောက်ဖက်(တောင်ဖက်)ကို ရေတွေစီးဆင်းသွားပြီး မြစ်ကြီးနားခရိုင် မြစ်ဆုံဒေသမှာ မလိခမြစ်နဲ့ သွားရောက်ပေါင်းစည်းပါတော့တယ်။ မြစ်ရေတွေဟာ နွေရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာဆို ရေပမာဏက အလွန်နည်းပါးတာတွေ့ရပါတယ်၊ မိုးရာသီဆိုရင်တော့ မိုးအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ခါတရံ မြစ်ရေလျှံလို့ ကမ်းပါးတွေတောင် ရေမြုပ်တတ်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင် ၂၀၁၂ တုန်းက မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ထိ အောင် ရေကြီးတာကြုံဖူးတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မြစ်ရေ စည်းချက် ဧရာဝတီ - ( ၂ )
ချီဖွေချောင်းနဲ့ အန်မိုင်ခမြစ်ဆုံရာမှာတော့ နွေဖက်ဆိုရင် မြစ်ပြင်ကျယ်သလောက် ရေနည်းပါးပြီး သောင်တွေထွန်းနေတာကို စတင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးတွင်းဆိုရင်တော့ မြစ်ကကျယ်သလို ရေပြင်ကြီးကလည်း အန်မိုင်ခမြစ်ရဲ့ အပေါ်ဖက်ထက်နှိုင်းယှဉ်ရင် ၃ - ၄ ဆလောက်ကို ကျယ်ဝန်းတာတွေ့ရပါတယ်။ မိုးများတဲ့အခါမှာ ‌ခေါင်လန်ဖူးဖက်ကနေ ရေတွေဟာ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝါးလုံးထိုးကို စီးလာတာဖြစ်လို့ လှေသမ္ဗန်တွေတောင် သွားလာဖို့ မလွယ်ကူတော့တာတွေ့ရပါတယ်။
တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေကြားမှာ မြစ်ကြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့ ကြည့်ရတဲ့သူအဖို့ကတော့ ရင်သပ်ရှုမော စရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချီဖွေကနေ မြစ်ဆုံဆီမရောက်ခင်မှာတော့ ၃ -၄ နေရာလောက်မှာ ကျောက်ဆောင် ကျောက်ကပါးယံတွေကြောင့်ရော ရေစီးသန်တာကြောင့်ရော လှိုင်းမို့မို့မောက်မောက်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ကြည့်လို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။
မြစ်ဆုံနားရောက်တော့ မြစ်ရေဟာ ခပ်ပြေပြေလေးစီးသွားပြီး ပိုပြီးတော့တောင် သာယာလှပနေတာကို တွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။ မြန်မာပြည်မြောက်ဖျား ရေခဲတောင်တွေကတစ်ဆင့် မြစ်လက်တက်ပေါင်းများစွာ စုပေါင်းပြီး စီးဆင်းလာတဲ့ အန်မိုင်ခမြစ်ရေတွေဟာ နွေနွေ မိုးမိုး ဆောင်းဆောင်း အလျင်မပြတ် စီးဆင်းနေတာ မြင်ရသူ သတိထားမိတဲ့သူကတော့ ဒီမြစ်ရေတွေဟာ ဒီအတိုင်း စီးမြဲစီးလို့ ဧရာဝတီမြစ်ကတစ်ဆင့် ပင်လယ်ထဲကို ဒီအတိုင်းရောက်သွားတာကို တွေးမိပြီး နှမြောတသ ဖြစ်မိပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပိုင် မြစ်ရေတွေဆိုပြီး ဂုဏ်ယူမိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြစ်ရေတွေကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်. . . .။ ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်သစ်များ တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် တရုတ...
အမေဇုန်မိုးသစ်တောက နောက်ထပ် ဗိုင်းရပ်စ် ပေါက်ပွားရာ ဇုန်တစ်ခု ဖြစ်...
Sex education ကို ဘာကြောင့် သင်ပေးရတာလဲ။
အမေရိကန် ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်၌ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့်...
အိန္ဒိယ၌ ယမကာဆိုင်များပြန်ဖွင့်ရာ လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်၍ ဆိုင်အချို့ ပြန်...
တရုတ်ရှိ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ခန့် အိန္ဒိယသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် စိတ်...
စတိုးဆိုင်ထဲ နေရာစုံမှာ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေသည့် အမျိုးသမီးကြောင့်...